बाढी के हो? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
मोनिका सान्चेज | | बाढी
वर्षा, विश्वका धेरै भागहरूमा धेरै स्वागत छ, तर जब पानी ठूलो बलको साथ वा लामो समयको लागि खस्छ, त्यहाँ त्यस्तो समय आउँछ जब जमिन वा शहर र शहरहरूको जल निकासी च्यानल यसलाई अवशोषित गर्न सक्षम हुन रोक्छ।
र निस्सन्देह, पानी तरल हो र यसैले, यस्तो तत्त्वले जुन जहाँ गए पनि आफ्नो बाटो बनाउँदछ, जबसम्म बादल छिटो छर्दैन, हामीसँग बाढीको बारेमा कुरा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। तर, तिनीहरू के हुन् र तिनीहरूलाई के कारणले?
1 तिनीहरू के हुन?
2 तिनीहरूलाई के कारण छ?
3 हामीसँग उनीहरूको प्रतिरक्षा कस्तो छ?
4 स्पेनमा बाढी
4.1 १ 1907 ०XNUMX को बाढी
4.2 भ्यालेन्सियाको ठूलो बाढी
4.3 १ 1973 ०XNUMX को बाढी
4.4 टेनेरिफ बाढी
4.5 Levante मा बाढी
4.6 मलागामा बाढी
तिनीहरू के हुन?
बाढी क्षेत्रहरु को पानी द्वारा कब्जा हो कि सामान्यतया यस मुक्त छन्। ती प्राकृतिक घटनाहरू हुन् जुन पृथ्वी पृथ्वीमा पानी भएकोले समुद्री तटहरू बनाउँदै नदी र उपजाऊ भूमिहरूको बेंसीमा मैदानहरू निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याइरहेका थिए।
तिनीहरूलाई के कारण छ?
तिनीहरू विभिन्न घटनाहरू द्वारा हुन सक्छ, जुन हुन्:
चिसो ड्रप: जब पृथ्वीको सतहको तापक्रम समुद्रको भन्दा चिसो हुन्छ। यो भिन्नताले तातो र चिसो हावाको ठूलो ठूलो हिस्सा वायुमण्डलको मध्य र माथिल्लो तहसम्म पुग्दछ, जसले गर्दा मुसलधारे वर्षा हुन्छ र परिणाम स्वरूप त्यहाँ बाढी आउन सक्छ।
स्पेनमा यो वार्षिक घटना हो जुन शरद fromतु देखि हुन्छ।
मानसुन: मानसून एक मौसमी हावा हो जुन इक्वेटोरियल बेल्टको विस्थापनबाट उत्पन्न हुन्छ। यो पृथ्वीको चिसो द्वारा हुन्छ, जुन पानीको भन्दा छिटो छ। तसर्थ, गर्मीमा पृथ्वीको सतहको तापक्रम समुद्रको तुलनामा बढी हुन्छ, जसले पृथ्वीको माथिल्लो हावा द्रुत रूपमा उचाल्छ, जसले आँधीबेहरी ल्याउँछ। जसै हावा एन्टिसाइक्लोन (उच्च दबाव क्षेत्र) बाट चक्रवातहरू (कम दबाव क्षेत्र) दुबै दबाबहरूलाई सन्तुलनमा राख्नको निम्ति चलिरहेको छ, एक तेज हावा समुद्रबाट लगातार चल्दछ। यसको नतिजाको रूपमा, वर्षा तीव्रताका साथ खस्छ र नदीहरूको स्तर बढाउँदछ।
तूफान: आँधी वा टाइफुन मौसमविज्ञानी घटना हो जुन धेरै नोक्सान गर्न सक्षम हुनुको अलावा, तीमध्ये धेरै हुन् जसले अधिक पानी खस्छन्। तिनीहरू बन्द सर्कुलेशन भएको आँधी प्रणाली हो जुन समुद्री तातोमा पोषण गर्दा कम दबावको केन्द्रको वरिपरि घुम्छ, जुन कम्तिमा २० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा हुन्छ।
पग्लनु: ती ठाउँहरूमा जहाँ यो अक्सर बारम्बार सुक्छ र थप रूपमा यसले यति प्रशस्त मात्रामा गर्दछ, तापमानमा अचानक वृद्धिले नदीहरूमा बाढी आउँछ। यो हिउँ पर्न भारी र असामान्य भएको छ भने यो पनि हुन सक्छ, एक दुर्लभ रूपमा एक उप-सुक्खा वा सुक्खा मौसम संग क्षेत्रहरु मा शायद नै यस्तो हुन्छन्।
ज्वार तरंग वा सुनामी: यी घटनाहरू बाढीको अर्को सम्भावित कारण हो। भूकम्पले गर्दा चलाइएको विशाल छालहरूले समुद्री तटमा नुहाउन सक्छ, यसले त्यहाँका बासिन्दाहरू र ठाउँको वनस्पति र ज for्गली जनावरहरूका लागि धेरै समस्या खडा गर्दछ।
तिनीहरू मुख्यतया प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रहरूमा देखा पर्छन्, जुन भूकंपीय गतिविधि बढी छ।
हामीसँग उनीहरूको प्रतिरक्षा कस्तो छ?
नदीहरू र उपत्यकाको नजिक बसोबास गर्दै मानवता बढी आसीन बन्न थालेदेखि यो जहिले पनि एउटै समस्या भएको छ: कसरी बाढीबाट बच्न? इजिप्टमा फिरऊनहरूको समयमा नील नदीले मिश्रीहरूलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याउन सक्थ्यो। त्यसकारण उनीहरूले चाँडै अध्ययन गरे कि कसरी पानी र बाँधहरू बदल्ने नहरहरूले आफ्नो बालीलाई बचाउन सक्छ। तर दुःखको कुरा तिनीहरू केहि बर्ष पछि पानी द्वारा नष्ट गरियो।
स्पेन र उत्तरी इटालीको मध्य युगको दौडान पोखरी र जलाशयहरू निर्माण भइसकेका थिए जसले नदीको मार्गलाई नियमित पारे। तर अहिलेको युगमा अहिलेसम्म यस्तो छैन जुन तथाकथित प्रथम विश्वका देशहरूमा बाढीलाई रोक्न हामी सक्षम छौं। बाँध, धातु अवरोध, जलाशय विनियमन, नदी नालाहरूको निकासी क्षमताको सुधार... यी सबै, एक विकसित मौसम पूर्वानुमानमा थपिएको छ, हामीलाई पानीलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न अनुमति दिएको छ।
साथै, बिस्तारै यो तटमा निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ, जुन बाढीको लागि धेरै जोखिमपूर्ण स्थानहरू हुन्। र तथ्य यो हो कि यदि प्राकृतिक क्षेत्र बोटबिरुवाहरू बाहिर समाप्त भए, पानीमा सबै कुरालाई नष्ट गर्ने थप सुविधाहरू हुनेछन्, यसरी घरहरूमा पुग्ने; अर्कोतर्फ, यदि यो निर्माण गरिएको छैन, वा यदि, अलि अलि गर्दै, स्वदेशी वनस्पति प्राणीहरूले मानिसलाई कठोर सजाय पाएको वातावरण पुनर्स्थापित गरियो भने, बाढीले सबै चीज नष्ट पार्ने जोखिम कम छ।
अर्कोतर्फ विकासोन्मुख देशहरूमा रोकथाम, सतर्कता र त्यसपछिको कार्यहरू जस्तो कम विकसित भएका छन्, दुर्भाग्यवश दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरूलाई तहसनहस गर्ने आँधीबेहरीमा देखिएको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा बस्ने जनसंख्यालाई सुरक्षित बनाउन कार्यहरूको पक्षमा रहेको छ।
स्पेनमा हामीले बाढीले ठूलो समस्या भोगेका छौं। हाम्रो भर्खरको ईतिहासमा सब भन्दा गम्भीर निम्न कुरा थिए:
१ 1907 ०XNUMX को बाढी
सेप्टेम्बर २,, १ 24 ०। मा, भारी वर्षाको परिणाम स्वरूप मालागामा २१ व्यक्तिको ज्यान गयो। पानी र माटोको ठूलो हिमस्खलन बोकेको गुआडाल्मीना बेसिन ओभरफ्लो भयो जुन height मिटर उचाईमा पुग्यो।
भ्यालेन्सियाको ठूलो बाढी
अक्टुबर १,, १ 14 .1957 मा टुरिया खोलाको बहावको परिणामस्वरूप people१ व्यक्तिको ज्यान गयो। त्यहाँ दुईवटा बाढी आएको थियो: पहिलोले सबैलाई चकित गर्‍यो, किनकि भ्यालेन्सियामा यसैले विरलै बर्षेको थियो; दोस्रो दिउँसो क्याम्प डेल टुरिया क्षेत्रमा आइपुग्यो। यो अन्तिममा 125l / m2 जमा, 90० मिनेटमा ती मध्ये 40 ०। नदीमा 4200२०० m3 / s को प्रवाह थियो। बेगिसमा (कास्टेलन) 361 2१ ल / एम २ जम्मा भएका थिए।
१ 1973 ०XNUMX को बाढी
अक्टुबर २,, २०१ 19, 600l / m2 जमा Zúrgena (Almería) र Al Albuñol (Granada) मा। त्यहाँ असंख्य मृत्युहरू थिए; थप रूपमा, ला रबिटा (ग्रेनाडा) र प्यूर्टो लुम्ब्रेरास (मुर्सिया) को नगरपालिका पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो।
मार्च ,१, २००२ 232.6l / m2 संचय गरिएको थियो, एक घण्टामा १162.6२.ll / m2 को तीव्रताका साथ, जसमा आठ व्यक्तिको मृत्यु भयो।
Levante मा बाढी
छवि - Ecestaticos.com
डिसेम्बर १ and र १,, २०१ 16 बीचमा भ्यालेन्सियन समुदाय, मर्सिया, अल्मेरिया र बेलारिक टापुहरूमा असर पार्ने लेभन्ते तूफानले people व्यक्तिको मृत्यु गरायो। धेरै बिन्दुहरूमा l००l / m600 भन्दा बढि जमा.
मार्च,, २०१3मा एक आँधीबेहरी १०० लिटर सम्म डिस्चार्ज मालागा प्रान्तको पोइन्टमा, जस्तै मालागा बन्दरगाह, पश्चिमी र इनल्यान्ड कोस्टा डेल सोल, सेरानिया र जेनाल उपत्यका। भाग्यवस, पश्चाताप गर्न कुनै मानवीय क्षति थिएन, तर आपतकालीन सेवाहरू रूखहरू र अन्य वस्तुहरू, र पहिरोमा खस्दा परिणामस्वरूप १ 150० भन्दा बढी घटनामा सहभागी भए।
यो यस्तो घटना भएको पहिलो पटक होइन। वास्तवमा यी घटनाहरू दु: खको रूपमा धेरै साधारण छन्। उदाहरणको लागि, फेब्रुअरी २०, २०१। १ square० लिटर पानी प्रति वर्ग मीटरमा सञ्चय गरियो एक रातमा भूतल फ्लोरको कारण बाढीको कारण २० Emerge incidents मा आपतकालिनहरू उपस्थित थिए, गिर्ने वस्तुहरू र सडकमा अडिएका सवारीहरू।
समस्या यो हो कि प्रान्त पहाडहरूले घेरेको छ। जब यो वर्षा हुन्छ, सबै पानी यो जान्छ। मालागाका मान्छेहरूले यसलाई रोकथाम गर्न उपायहरू लिन लामो समयदेखि आग्रह गरिरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम घटनाहरू » बाढी » बाढी के हो?
सबै भन्दा राम्रो वर्षा अलार्म अनुप्रयोगहरू